စာကလေးတောင် - ဝီကီပီးဒီးယား
Luzhnetskaya Embankmentမှ မြင်တွေ့ရသော စာကလေးတောင်မြင်ကွင်း
စာကလေးတောင်(ရုရှား: Воробьёвы го́ры, Vorobyovy Gory)(၁၉၃၅ မှ ၁၉၉၉ ခုနှစ်တွင်အတွင်း လီနင်တောင်(Ле́нинские го́ры, Leninskiye Gory) ဟုခေါ်ခဲ့)သည် မော်စကိုမြစ်၏ ညာဘက်ကမ်းတွင်တည်ရှိပြီး မြစ်ရေမျက်နှာပြင်ထက် ၆၀–၇၀ မီတာ (၂၀၀–၂၃၀ ပေ) မြင့်ပြီး ၂၂၀ မီတာ (၇၂၀ ပေ) မြင့်မားကာ မော်စကိုမြို့ရှိ အမြင့်ဆုံးသောနေရာများမှ တစ်ခုဖြစ်သည်။
ရှုခင်းသာမှနေ၍ကြည့်လျှင် မြို့၏ လှပသော မြင်ကွင်းကျယ်ကို မြင်နိုင်ပြီး ထိုရှုခင်းသာသည် မြစ်၏ ၈၅ မီတာ (၂၇၉ ပေ) မြင့်သော မတ်စောက်သော ကမ်းပါတွင် တည်ရှိပြီး ပင်လယ်ရေမျက်နှာပြင်ထက် ၂၀၀ မီတာ (၆၆၀ ပေ) မြင့်သည်။ ၁၉၈၀ နွေရာသီ အိုလံပစ်အားကစားပွဲတော်(1980 Summer Olympics)နှင့် ၂၀၁၈ ဖီဖာ ကမ္ဘာ့ဖလားပြိုင်ပွဲတို့၏ ဖွင့်ပွဲနှင့် ပိတ်ပွဲတို့ကို ကျင်းပခဲ့သည့် လုရှ်နီကီ အားကစားကွင်း(ယခင် လီနင် အားကစားကွင်း)သည် ရှုခင်းသာမှ လှမ်းမြင်နိုင်သော မော်စကိုမြစ်တစ်ဖက်ကမ်းတွင် တည်ရှိသည်။ ထိုအားကစားကွင်းပြီးလျှင် Naryshkin Baroque towers တို့ဖြင့် ခမ်းနားလှသော နိုဗာဂျယ်ဗီချီ သီလရှင်ကျောင်း(Novodevichy Convent)အား မြင်တွေ့ရနိုင်ပေသည်။
ရှုခင်းသာနှင့် မနီးမဝေးတွင် လုရှ်နီကီ မီသရိုတံတား(Luzhniki Metro Bridge) တည်ရှိသည်။ အဆင့်နှစ်ဆင့်ပါသော ထိုတံတားသည် ကာစာမော့စကီး လမ်းမကျယ်နှင့် ဗျယ်နာ့ဒ်စကီး လမ်းမကျယ်ကို ဆက်သွယ်ပေးထားသည်။ မြို့ပြသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးစနစ်များဖြစ်သည့် မော်တော်ကားများနှင့် မော်စကို မီသရိုနှစ်မျိုးလုံး အသုံးပြုနိုင်သော တံတားဖြစ်သည်။ မှန်တို့ဖြင့် ကာရံထားသော ဗာရာဗျို့ရီး ဂေါရီး မီသရိုဘူတာရုံ(Vorobyovy Gory)သည် တံတား၏ အောက်ထပ်တွင် တည်ရှိသည်။
ရုရှား ကဗျာဆရာ၊ စာရေးဆရာတို့၏ စာပေတို့တွင် ညွှန်းဖွဲ့ခြင်းခံရသော ဤတောင်ကုန်းသည် ဗာရာဗျို့ဗာရွာ(Vorobyovo)ကို အစွဲပြု၍ မှည့်ခေါ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီး နယ်စားကတော် ဆိုဖီယာ ဗီတော့ဗ်တိုဗနာ(Sophia Vitovtovna)မှ မြေရှင် ဗာရာဗျို့ဗီး(Vorobyovs)ထံမှရယူခဲ့သော ကျေးရွာဖြစ်သည်။ ပထမမြောက် အလက်ဇန္ဒား(Alexander I of Russia)သည် ကယ်တင်ခြင်း ခရစ်တော် ကာသီဒရယ်(Cathedral of Christ the Saviour)ကို ထိုတောင်ကုန်းပေါ်တွင် ဆောက်လုပ်ရန် ရည်ရွယ်ခဲ့သော်လည်း ၎င်းနောက် ဆက်ခံသူသည် ထိုတည်ဆောက်မှုအား ဆိုင်းငံ့ခဲ့ပြီး ကရင်မလင်အနီးတွင် ပြောင်းလဲတည်ဆောက်ခဲ့သည်။
ထိုတောင်ကုန်းပေါ်ရှိ မော်စကို တက္ကသိုလ်နှင့် ထရီနတီ ဘုရားရှိခိုးကျောင်း(Trinity Church)ကဲ့သို့ ထင်ရှားသော အဆောက်အဦများ တည်ရှိသည်။
စာကလေးတောင်မှမြင်ရသော မော်စကိုမြို့လယ်နှင့် မြောက်ပိုင်းမြင်ကွင်း
↑ Знаменитое село Воробьёво, расположенное на горах того же названия, также восходит к боярскому роду Воробьёвых, известному в середине XIV в. — См. Тихомиров М. Н. Древняя Москва (XII-XV вв.) : Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова М. : Изд-во МГУ, 1947။ ၁၂ ဩဂုတ် ၂၀၁၈ တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
Тихомиров М. Н. Древняя Москва (XII-XV вв.) : Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова М. : Изд-во МГУ, 1947
Wikimedia Commons တွင် စာကလေးတောင် နှင့် ပတ်သက်သော မီဒီယာ ရှိသည်။
ကိုဩဒိနိတ်: 55°42′36″N 37°32′35″E﻿ / ﻿55.710°N 37.543°E﻿ / 55.710; 37.543
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=စာကလေးတောင်&oldid=417153" မှ ရယူရန်
ဤစာမျက်နှာကို ၁၂ ဩဂုတ် ၂၀၁၈၊ ၀၁:၃၅ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။